MR MRT: အမြင်တော်ဖို့
“သတို့သား သတို့သမီးတွေ အနေနဲ့ လင်ကျင့်ဝတ် မယားကျင့်ဝတ်တွေ သိကြပြီးသားပါ။ အဲ့ဒါတွေ မပြောတော့ဘူး။ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ဘ၀တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက် . . . သင့်တော်တဲ့ အမြင် ရှိဖို့ပဲ သတိပေးချင်ပါတယ်။
လူ့ဘ၀ ရုန်းကန်ကြတဲ့ နေရာမှာ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေ ကြုံကြရတာပဲ။ ငွေကြေး ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းသာချမ်းသာ ဘ၀ပြဿနာတွေ ရှိတာပဲ။ ဘ၀အခက်အခဲတွေ တွေ့ရတာပဲ။ လူ့သဘာဝ . . . လောကဓမ္မတာ . . .။ ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံ . . . အမြင်မတော်ဘူး အမြင်မကြည်ဘူး၊ သင့်တော်တဲ့ ရှုထောင့်က မကြည့်တတ်ဘူး မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပြဿနာတွေ တစ်ခုက နှစ်ခု တိုးလာမယ်၊ အခက်အခဲတွေ ခက်သည်ထက် ခက်လာမယ်၊ အကြပ်အတည်းတွေ ကြပ်သည်ထက် ကြပ်လာမယ်။ လောကထဲမှာ ကြင်လည်တော့ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေဟာ . . . သင့်တော်တဲ့ အမြင် ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ . . . ပြဿနာတွေ လျော့မယ်၊ အခက်အခဲတွေ လွယ်သွားမယ်။
ဘ၀မှာ စီးပွားရေးတွေ လုပ်ကြရမယ်။ လူမှုရေးတွေ ဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်၊ သူ့ဆွေးမျိုး ကိုယ့်ဆွေမျိုး . . . သူ့မိတ် ကိုယ့်မိတ် . . . ဆက်စပ်ပတ်သက်ပြီး လူရေးလူရာတွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြရမယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ သင့်တော်တဲ့ အမြင် ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ဆိုကြပါစို့ . . .။ အခု . . . မင်္ဂလာဦး အိမ်ထောင်ဦး . . . ကုသိုလ်ပြုကြတယ်။ သံဃာတော်တွေကို ပင့်ဖိတ်ပြီး . . . အိမ်ထောင်ဦး သင်္ကန်းကပ်တယ်။ ဆွမ်းကပ်တယ်။ ခဲဘွယ်ဘောဇဉ်တွေ ဆက်ကပ်တယ်။ တတ်စွမ်းသမျှ လှူဒါန်းကြတယ်။ ဒီနေ့ ကြိုတင်ပြီး ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်မှာက မနက်ဖြန်မှ။ မနက်ဖြန်ကျရင် ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟတွေနဲ့ . . . ကျွေးကြမွေးကြ ဧည့်ခံကြမယ်။ အဲ့ဒီတော့ . . . မနက်ဖြန်ကျရင် အလုပ်ရှုပ်မှာမို့ ဒီနေ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ကြိုရှင်းထားတာလား။
မနက်ဖြန်ကျရင် မင်္ဂလာ ဧည့်ခံပွဲနဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှာမို့ ဒီနေ့ . . . ဘုန်းကြီးတွေကို ကြိုရှင်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင် ရိုင်းသွားပြီ။ ပြောရတဲ့သူလည်း မကောင်းဘူး။ ကြားရတဲ့သူလည်း မကောင်းဘူး။ လုပ်ရကိုင်ရတဲ့သူတွေ အဆင်မပြေတော့ဘူး။ မနက်ဖြန် လူတွေကို ကျွေးမှာ . . .။ ဒီနေ့ ဘုန်းကြီးတွေကို အရင်ကပ်တာ။ လူတွေကို မကျွေးခင်း ဦးဦးဖျားဖျား ဆက်ကပ်တာ။ သံဃာတော်တွေကို ဦးစားပေးတာ။ ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားတဲ့ အနေနဲ့ မင်္ဂလာပွဲ မတိုင်ခင် ကုသိုလ်လုပ်တာပါ ဆိုရင်တော့ . . . ယဉ်ကျေးသွားတာပေါ့။ အဲ့ဒီလို မြင်ရမယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်ထားရမယ်။
ဘုန်းကြီးတွေ ဘက်ကလည်း . . . ဒီဒကာဒကာမတွေက ငါတို့ကို ကြိုရှင်းထားတာလို့ မြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် သံဃာတော်တွေအတွက် မကောင်းတော့ဘူး။ ငါတို့ကို အရင် . . . ငါတို့ကို ဦးထိပ်တင်တာလို့ မြင်မှ အဆင်ပြေမယ်။
အခု . . . အိမ်ထောင်ဦး သင်္ကန်းကပ် မင်္ဂလာဆွမ်း ကပ်တာကိုပဲ နှစ်မျိုးမြင်လို့ ရတဲ့နေရာမှာ သင့်တော်တဲ့ဘက်က အမြင်တော်အောင် ကြည့်သလို . . . ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကြုံရတဲ့ အရေးကိစ္စတွေကိုလည်း တော်တဲ့ဘက်က ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ သတိပေးပါတယ်။
ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အစုစုဟာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကောင်းမြတ်တဲ့ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေ။ ဘ၀မှာ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွန်နိုင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အထောက်အပံ့ကောင်း ဖြစ်စေ။ ကိုယ့်ကုသိုလ်ကို ကြားနိုင် သိနိုင် မြင်နိုင်သူတွေ ၀မ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။ ရေစက်သွန်ချ အမျှပေးဝေမယ်။”
Posted by Ashin Acara. at 12:53 AM